Fitaovana fanamafisana induction ho an'ny famonoana, fanalefahana, fampidirana an-tany, fametahana sns.
Sokajy: fampakarana hafanam-be Tags: mividy fitaovana fanamafisana induction, fantson-tany, rafi-pampianarana hafanana avo lenta, fantsonan'ny indostriam-pandehan'ny hafanana, fitaovana fampidirana hafanana, induction heater, induction heating, fampiharana fitaovana fanamafisana induction, vidin'ny fitaovana fanamafisana induction, fitaovana fanamafisana induction, famokarana fanorana induction, rafitra fanamorana ny induction
Famatsiana fitaovana fanamafisana induction
HLQ Induction Heating Machine Co dia manamboatra isan-karazany fitaovan'ny fitaovana fanamafisana induction anisan'izany ny andiam-be amin'ny angovo avo lenta, ny serasera mahazaka hafahafa, ny serasera mahazaka hafahafa ho an'ny fanamainana, ny fako, ny famokarana, ny fandefasana, ny fanamboarana, ny fako, ny fampihorohorona ary ny fanamafisana ny fitsaboana.
Ny teôria fitaovana fampidinana fampidirana
Amin'ireto fitaovana fanafanana induction ireto dia ampiharina ny circuit oscillating andiany, amin'ny alàlan'ny fanovana matetika, ny herinaratra ambany ary ny herinaratra avo lenta dia mivoaka hamakivaky ny coil fampidirana.
Ny milina andian-dahatsoratra DW-HF-15KW sy DW-HF-25KW no maodely voalohany novolavolaina tao amin'ny orinasanay, amin'ny fampiasana ireo singa MOSFET sy IGBT ary ny teknolojia fanaraha-maso miverimberina ho an'ny taranaka voalohany, ny masinina dia aseho miaraka amina rafitra tsotra, fahamendrehana avo ary vidiny ambany, ary mora ampiasaina izy ireo ary manamboatra, ary ankehitriny no milina be mpampiasa indrindra any Chine sy any ivelany.
Ao amin'ny andiana DW-HF-35KW sy DW-HF-45KW induction heating milina, modely IGBT ary ny teknolojia fanaraha-maso inverting an'ny taranaka faharoa no nampiasaina, izany no teknolojia fanaraha-maso roa sy famadihana. Amin'ireto teknolojia vaovao ireto, ny herin'ny output sy ny refin'ny oscillating dia fehezina tsy miankina. Mampiasa singa IGBT izahay ary ny malefaka avo lenta mifehy ny fizaran-tany mifehy mba hifehezana ny herinaratra ary mampiasa singa IGBT izahay, oscillating andiany ary fizaran-tany mandeha ho azy hahatratrarana fifandimbiasana malefaka ao amin'ny làlana mihodina, ireo rehetra ireo dia mahatonga ny milina ho azo itokisana kokoa ary hahatonga ny masinina azo atao. hiasa tsy tapaka miaraka amin'ny tsingerin'ny adidy 100%.
Raha ampitahaina amin'ny masinina miaraka amin'ny haitao voalohany, ny haitao faharoa dia mety kokoa amin'ny milina mpamokatra herinaratra lehibe hahazoana azo itokisana kokoa.
Noho ny fampiasana ny haitao mandroso, ny milina andian-dahatsoratra DW-HF-35KW sy DW-HF-45KW dia voatanisa noho ny elanelam-potoana lehibe kokoa, habe kely kokoa, mpanamontsina nampangatsiaka ny rano, azo itokisana kokoa ary ambany ny vidin'ny fanamboarana.
Ao anatin'ny andian-DW-HF-70KW fitaovana fanamainana induction, Module IGBT sy ny teknolojia fanaraha-maso inverting an'ny taranaka fahatelo no nampiasaina, izany dia ny teknolojia malefaka sy roa ary ny teknolojia mamadika. Amin'ity haitao ity, ny herinaratra famoahana sy ny fahita matetika dia azo fehezina sy ahitsy manokana, ny modely IGBT ary ny teknolojia fanaraha-maso malefaka dia ampiasaina ao amin'ny faritra mihodina avo matetika hifehy ny herin'ny vokatra. Ao amin'ny boriborintany miverimberina dia ampiharina ny IGBT sy ny fizaran-tany matetika hahatratrarana haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha sy marina. Ny fananganana teknolojia vaovao dia tsy vitan'ny fanatsarana ny kalitao sy ny fahamendrehan'ny milina, fa ny famahana ny olan'ny teknolojia amin'ny hery lehibe koa induction heating machine ary ahafahana miasa tsingerin'ny adidy 100%.